IS oo "hareereyneysa" Kurdida Suuriya - BBC News Somali
IS oo "hareereyneysa" Kurdida Suuriya
11 Oktoobar 2014
Image caption Dad dhanka Turkiga ka daawanaya madaafiicda ku dheceysa Kobani
Ilo wareedyo ka tirsan Kurdiyiinta Suuriya oo ku sugan gudaha magaalada Kobani, ayaa u sheegay laanta Arabiga ee BBC in xoogagga Daacish ay weerar ku qaadeen bar koontorool oo ku taalla galbeedka magaalada, oo aad ugu dhow soohdinta Turkiga, balse ay weerarkaasi ku guul dareysteen.
Sarkaal ka tirsan xoogagga Kurdiyiinta Suuriya ayaa sidoo kale xaqiijiyay in Daacish ay weeraro xoogan ku qaadeen goobo dhowr ah oo ay ku sugan yihiin dagaalyahannada kasoo horjeeda.
Khalid Berkel, oo ah ninka labaad ee ugu sareeya ismaamulka deegaanka Kobani, kuna sugan magaaladaasi ayaa khadka telefoonka BBC ugu sheegay in kooxda dowladda Islaamka ay hormar aad u yar ka sameysay dagaalka Kobani.
Waxa uu intaa ku darray in dagaalyahannada I-S ay dagaalkooda u adeegsanayaan gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay iyo dad is miineeyay, ayna awoodda saarayaan sidii ay ku gaari lahaayeen bartamaha magaalada Kobani.
Image caption Dad badan oo ka qaxay Kobani ayaa ku sugan gudaha Turkiga
Iyadoo taasi ay jirto hadana, xoogagga dowladda Islaamka waxa ay la wareegeen dhul ballaaran oo ka tirsan magaalada ku taalla xuduudda Suuriya iyo Turkiga ee Kobani.
Waxa ay gacanta ku dhigeen xaruntii malleeshiyada Kurdiyiinta, waxay halkaasi la wareegeen iyadoo weli ay socoto duqeynta diyaaradaha xulafada Mareykanka ay halkaasi ka fulinayaan.
Weriye BBC ka tirsan ayaa sheegay in I-S ay hadda halis ku tahay inay qabsato meesha laga gudbo ee xuduudda oo ah goobtii ugu dambeysay ee dadka baxsad ka ah ay ka galaan dalka Turkiga.
Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn in Kobani laga difaaco kooxda u dagaallameysa dowladda Islaamka.
Image caption Dagaal yahan IS ka difaacaya Anbar
dhanka kale, Saraakiisha dalka Ciraaq ee galbeedka gobolka Anbaar ayaa dalbaday faragelin degdeg ah, iyadoo xoogagga dowladda Islaamka inay isku deyayaan inay xoog ku qabsadaan xarumaha dowladda ee halkaasi.
Seddaxdii isbuuc ee ugu dambeysay, mintidiinta I-S waxay qabsadeen laba xarun oo ay lahaayeen ciidamada Ciraaq, maalinkastaana waxaa dagaal uu ka dhacaa duleedka xarunta gobolka ee Ramadi.
Image caption Ciidamada Ciraaq oo Anbaar ka ilaalinaya kooxda IS
Duqeymaha diyaaradaha ee Mareykanka uu hogaaminayo waxaa ay joojiyeen kooxda oo ku sii dhowaaneysay biyaxireenka muhiimka ah ee Xaditha, balse waxay ku guuldareysteen inay weeciyaan sii socoshaha I-S.
Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegaya in xaaladda Anbaar ay tahay “mid aan xasilooneyn”.
Haddii Anbaar la qabsado, I-S waxay xukumi doontaa dhul aad u ballaaran, oo ka soo bilowda Suuriya illaa xadka Turkiga illaa duleedka magaalada Baqdad, halkaas oo ay daadsan yihiin madaafiicdooda.